नेकपामा जबजको वामदेवपथ, ओलीलाई कहिलेसम्म राहत ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
नेकपामा जबजको वामदेवपथ, ओलीलाई कहिलेसम्म राहत ?
२०७७ श्रावण १५, बिहीबार ०७:५५:००
नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतम एउटा पात्र मात्र होइन, प्रवृत्तिको नाम हो । त्यही कारण उनका धेरै समकालीन नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिबाटै लोप भइसक्दा पनि उनी खेलाडीकै रुपमा स्थापित छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्ची ढल्ने कि जोगिने भन्ने फैसला समेत उनको एक विज्ञप्तिले गर्ने स्थिति बनिरहेको छ । वामदेव प्रवृत्ति भनेको अस्थिरता र अवसरवादको अर्को नाम हो । अवसरवाद आफैमा सबै वादहरुको मिश्रण हो ।
अझ भनौँ कुनै वाद बाँकी नरहेपछि मान्छे अवसरवादमा प्रवेश गर्छ । सम्पूर्ण वैचारिक धरातल रसातलमा पुगेपछि मान्छे अवसरवादको घोडा चढ्छ । वामदेवले यही गरिरहेका छन् ।
नेकपा एमाले फुटाएर माले बनाउँदा उनीसँग एउटा मुद्दा थियो । मुद्दामा अडान थियो । महाकाली सन्धि धोका हो भन्दै उनी मसाल लिएर हिँडेका थिए । त्यस मसालले देशभरिबाट तत्कालीन नेकपा एमालेलाई जलाएर खरानी बनायो आमनिर्वाचनमा ।
एमालेमा फर्किँदा भने मुद्दा र मसाल उतै छाडे । अवसरवादको घोडा चढेर सत्ताको बाटोमा फिता नाप्न थाले । वामदेव नेकपाभित्रका गच्छदार हुन् । उनी सत्ताभन्दा पर बस्न सक्दैनन् ।
गएको आमनिर्वाचनमा बर्दियाका जनताले उनलाई हार चखाइदिएपछि घाइते बाघजस्तो भएका छन् । सत्ताको आलो रगतमा बानी परेकाहरु सत्ताबाहेक बाँकी कुरा सब भ्रम भन्ठान्छन् ।
उनीहरुको अभीष्ट हुन्छ, सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति । केवल यी तीन मन्त्रमा रहेर यिनले जे सक्छन्, त्यो गर्छन् । आफूले चाहेको कुरा प्राप्न नगरे विनाशको बाटो रोज्छन् ।
त्यसको क्षति तिनका सबभन्दा नजिकमा रहनेहरुले बेहोर्छन् । ओलीबाट जे प्राप्त गर्नु थियो, त्यो नभएपछि ओलीलाई सिध्याउन उनी लागे । ओलीले उनलाई सांसद बनाउनुपथ्र्यो, बनाएनन् ।
कास्की, हुम्ला, डोल्पा वा काठमाडौँ कतैबाट पनि वामदेवलाई पुनः जिताउने ठेक्का ओलीले लिएनन् । राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरी संविधान समेत संशोधनको प्रस्ताव ओलीले अघि बढाउनुपथ्र्यो, त्यो गरिदिएनन् ।
वामदेवपत्नी तुल्सा थापालाई ओलीले समानुपातिक सांसद मात्रै बनाए, मन्त्री बनाउनुपथ्र्यो । त्यही भएर भड्किएको आत्माजसरी वामदेव कहिले कोटेश्वर त कहिले खुमलटार पुगे । ओलीले भने, भावी अध्यक्षको तयारी गर्नू ।
जबजको मन्त्र जप्नू । शीतल निवासको दर्शन गरिरहनू । धेरै बकबक नगर्नू, फल त्यसै प्राप्त हुनेछ । तर वामदेव अधैर्य भए । फेरि भैँसेपाटी र खुमलटारमा भेला बोलाए । माधव नेपाल र प्रचण्डलाई उकासे । नारायणकाजीसँग कानेखुसी गरे ।
झलनाथ खनालको उक्साहटबाट उक्सिए । तर यो समूह आफैमा भड्किएका अतृत्म आत्माहरु थिए । त्यसमा वामदेव जाँदा थप एक थान अतृप्त आत्मा थपिन्थ्यो ।
नारायणकाजी गोरखाबाट पराजित भएर अहिले ओलीकै आशिर्वादमा राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाएका । प्रचण्ड चितवनमा छोरीलाई अनेक षड्यन्त्रबाट जिताउन सफल भए पनि आफू कुनै हालतमा नजित्ने पक्का भएपछि पार्टी नै एमालेमा विलय गराएर आफ्नो अस्तित्व जोगाएका र ओलीकै हाराहारी हैसियत पाएका ।
माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पालैपालो महाधिवेशनमा पराजित भएका । उनीहरुकै लहरमा बर्दियाबाट आमनिर्वाचनमा लोप्पा खाएका वामदेव पसेपछि उनले पाउने थप अर्को एउटा लोप्पा नै थियो ।
त्यहीकारण बेलाबेला उनी आफ्नो यथार्थ हैसियत बुझ्छन् र ओलीनिकट पुग्छन् । यतिखेर ओलीको पुनः उद्धार वामदेवले गरिदिएका छन् । वामदेवकै कारण खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अर्को एक खड्गो टरेको छ ।
टरेको के भन्नु, केही दिन पर सरेको छ । यसबीचमा वामदेवसँग केके लेनदेन हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । ओलीलाई अर्को सुविधाजनक अवस्था के बनेको छ भने प्रचण्डको पूर्वमाओवादी खेमा पूरै छिन्नभिन्न भएको छ ।
पूर्वएमाले खेमाका माधव नेपालका दाहिने हात भीम रावलसमेत प्रचण्डको बार्गेनिङ हतियार नबन्ने घोषणा गर्न पुगेका छन् । विरोधी खेमा जति कमजोर र छिन्नभिन्न बन्छ, वामदेवको बार्गेनिङ शक्ति घट्दै जानेछ ।
यदि वामदेवले धैर्य गरेमा ओलीको विरासत बोक्न सक्नेछन् । आगामी महाधिवेशनमा ओली खेमाको नेतृत्व गरी चुनावी मैदानमा उत्रिन सक्नेछन् । उनलाई झलनाथ खनालको समेत साथ रहने प्रवल सम्भावना छ, जसरी बुटवल महाधिवेशनमा वामदेवले खनाललाई साथ दिएका थिए ।
जबजका बारेमा अब वामदेवले लेख लेखेर मात्र पुग्ने छैन, किताबै प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यति गरेपछि शीतलनिवासदेखि एमाले पंक्तिले उनलाई स्वीकार गर्न कुनै आइतबार लाग्ने छैन ।
प्रचण्ड र माधव नेपालले भने यसबीचमा एमाले पंक्तिको सहानुभूति गुमाउँदै गएका छन् । त्यसको लाभ पनि वामदेवले उठाउन सक्नेछन् । तर, वामदेव प्रवृत्तिको सत्तामा पुनरोदय देश र दल स्वयंका लागि सुखद संकेत भने होइन ।